Dokambarotra Fiokoana Anaty Akata any amin’ny Metro no Ankalazan’ny Sosialista Rosiana ny Andro Iraisampirenena ho an’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2017 20:43 GMT
Sary: Hetsika Sosialista Rosiana
Tamin'ny Talata, andro iray alohan'ny hanondrahan'ireo lehilahy Rosiana an-tapitrisany voninkazo ireo vehivavy tiany noho ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Vehivavy, nandao ny fomban-drazana fitorahana voninkazo ny mpikatroka ao amin'ny Hetsika Sosialista Rosiana ary nametaka dokambarotra tany anaty metro-n'i St. Petersburg izay manasongadina ny olan'ireo vehivavy toy ny fanararaotana any an-tokantrano, ny tsy fitovian-karama, sy ny herisetra ara-nofo. Napetaka ny sora-baventy ho toy ny fanambarana hanaovana hetsi-panoherana tsy nahazoana alalana kasain'ny vondrona hatao ao an-dalàmben'ny Malaya Sadovaya amin'ny 3 ora tolakandro ny 8 Martsa .
Araka ny tranonkalan'ny hetsika, mihoatra ny 10.000 ireo vehivavy maty isan-taona ao Rosia noho ny herisetra an-tokantrano. Tsy nilaza ny momba izany ny vondrona, kanefa tena azo antoka fa azo inoana izany. Tamin'ny taona 2003, nihevitra ny Amnesty International fa mihoatra io mihitsy aza ny isan'ny vehivavy Rosiana matin'ny herisetra an-tokantrano .
” Vao haingana ny fanjakana no nanao ho ara-dalàna ny herisetra an-tokantrano, raha tokony hanangana foibem-pamahana krizy sy fialofana maromaro, na hampiditra rafitra fiarovana toy ny didy vonjimaika manakana ny fifampikasokasohana,” hoy ilay mpikatroka raha nanoratra an-tserasera.
Iray amin'ireo “dokambarotra” nasehon'izy ireo tao amin'ny metro-n'i St. Petersburg ny vehivavy iray miafina ao ambadiky ny fehezan-draozy. Ao amin'ny sary, misy dian-daroka ny masony ary mivaky toy izao ny soratra, “Natao ho an'ny maty ny voninkazo !”, Izbito no ilazana ny andian-teny amin'ny teny Rosiana, izay sady midika hoe “tafahoatra” fa raha adika ara-bakiteny dia “voadaroka”.
Mikendry ny fanavakavahana ao amin'ny toeram-piasana ihany koa ilay peta-drindrina sosialista, izay ahitana ireo vehivavy Rosiana mikarama latsaka 30 isanjato noho ny an'ireo lehilahy, sy ireo vehivavy mbola tsy afaka manao ara-dalàna ireo asa maherin'ny 450, ao anatin'izany ohatra ny familiana metro. Ao amin'io fomba fisainana io, nasehon'ny peta-drindrina iray hafa ny vehivavy mandrefy ny valahany, miaraka amin'ny teny faneva hoe “Ahenao ny lanja! Manaova kely tahaka ny karamanao. “
Miresaka ny varotra ara-nofo ny peta-drindrina iray hafa , mampiseho ny vehivavy iray miaraka amin'ny dokambarotry ny fivarotan-tena eny an-dalambe mipetaka eo amin'ny tarehiny, ary hoy ny soratra, “Manaova tsara tarehy! Mankasitraka anao izy ireo. “
Araka ny fihevitr'ireo mpikatroka, anisan'ny aingam-panahy avy amin'ny tantara ratsy tao amin'ny fiaramanidina Aeroflot ity sary ity, izay vao haingana no nahitana mpiasa maromaro niampanga ny orinasa ho manavakavaka ireo mpiasan'ny sidina tranainy sy lehibebe vatana kokoa amin'ny sidina iraisampirenena, nandà marindrano ny fiampangana ny Aeroflot.
Raha mampisy fiovana ny dokambarotry ny sosialista ao St. Petersburg tao amin'ny metro , dia ilain'izy ireo avy hatrany izany amin'ny tolona ho an'ny zon'ny vehivavy sy ny fanajana ao Rosia.
Dokambarotra ho an'ny tady plastika manavakavka ny vehivavy ampahibemaso amin'ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Vehivavy.
Tamin'ny fotoana indrindra namoahan'ireo liam-pandrosoana ny dokambarotra tao amin'ny metro ny talata teo, nandefa dokambarotra tao amin'ny vohikalany ihany koa ny orinasa iray ao an-toerana izay mamokatra tady plastika ary mampiseho vehivavy iray manao bikini, mifatotra, lasa mangana, ary tsy afa-mihetsika. Ahitana ny teny hoe ” hodorana any amin'ny afobe i Clara Zetkin,” ny rohin'ny dokambarotra ary angamba natao hanondroana ilay marksista alemà, izay nanampy tamin'ny fanombohana ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Vehivavy zato taona mahery lasa izay.
15 ora izayBelarosia